Abenzi nabahlinzeki be-White White | I-China White LED Factory
Uchungechunge lwe-COB MF-12SA / 13SA / 18SA olulodwa lokufiphaza
Incazelo yoMkhiqizo [K] [Im] [lm / w] [mA] Typ.Vf [W] [mA] [W] (LES) (V) CCT @ Typ.If @ Typ.If Typ.lf Power Max. Uma uMax. Amandla MF-12SA-1830-SS-A1C2-K7 8.6mm 30 92 1800 105 88 40 30 1.2 420 13.9 3000 1261 109 350 33 11.6 MF-13SA-1830-SS-5161-K7 6mm 17.5 92 1800 22 ...
Ukukhanya okuphezulu okukhanyayo okungu-3030 okuholelekile
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-3030 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwesibani se-LED, ukukhanyisa emuva nokunye. I-White Power LED iyatholakala ebangeni lokushisa kombala kusuka ku-2600K kuye ku-7000K. Le ngxenye inokuphrinta konyawo okuhambisana nobukhulu obulinganayo be-LED emakethe namuhla. • Usayizi: 3.0 x ...
Ukukhanya okuphezulu kwe-SMD LED 4014
Incazelo Yomkhiqizo I-4014 White LED eklanywe kusetshenziswa i-chip eluhlaza okwesibhakabhaka ne-phosphor. Inqubo yokupakisha yenqubo ye-centrifugal, indawo yokukhanya efanayo, ukusebenza okuhle kakhulu kwe-anti-vulcanization, ngokuya ngamazinga wokuhlola we-United States Energy Star; Iphakethe lezintambo zegolide, imikhiqizo ngokusebenzisa umthelela wokushisa okuphezulu nophansi (-40 ℃ / 30min ~ 125 ℃ / 3omin) imijikelezo engu-500 yokuhlolwa kokwethenjelwa, ephakeme kunesilinganiso sokuhlola ukuthembeka esinamandla kakhulu embonini ...
I-5050 LED Bulb enokumelana nokushisa okuphezulu
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-5050 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwesibani se-LED, ukukhanyisa emuva nokunye. I-White Power LED iyatholakala ebangeni lokushisa kombala kusuka ku-3000K kuye ku-6500K. Le ngxenye inokuphrinta ngonyawo okuhambisana nobukhulu obulinganayo be-LED emakethe namuhla. • Usayizi: 5.0 x 5.0 ...
I-Aluminium Substrate COB-13AA Spot ukukhanya kwe-LED
Incazelo Yomkhiqizo Umthombo wokukhanya we-COB uyimodyuli eyodwa ekhipha ukukhanya lapho umenzi ehlanganisa ama-chip amaningi we-LED ngqo ku-substrate. Ngoba umthombo wokukhanya we-COB usebenzisa ama-chip amaningi we-LED aqondiswe ngqo kwi-substrate yokushiswa kokushisa, yehlukile kunendlela yendabuko yokupakisha ye-LED. Ngakho-ke, isikhala esithathwa yilezi chips ze-LED ngemuva kokupakisha kwe-chip sincane ngokwedlulele, futhi amachips we-LED ahlanganiswe ngokuqinile angakwazi ukukhulisa ukukhanya okuphumelelayo, ngakho-ke lapho i-C ...
I-Big Power Aluminium Substrate COB-28AA LED Light
I-COB -38AA ukusebenza okukhanyayo okuphezulu ngekhwalithi enhle
Incazelo Yomkhiqizo Umthombo wokukhanya we-COB uyimodyuli eyodwa ekhipha ukukhanya lapho umenzi ehlanganisa ama-chip amaningi we-LED ngqo ku-substrate. Ngoba umthombo wokukhanya we-COB usebenzisa ama-chip amaningi we-LED aqondiswe ngqo kwi-substrate yokushiswa kokushisa, yehlukile kunendlela yendabuko yokupakisha ye-LED. Ngakho-ke, isikhala esithathwe yilezi zingqimba ze-LED ngemuva kokupakisha kwe-chip sincane ngokwedlulele, futhi amachips we-LED ahlanganiswe ngokuqinile angakwazi ukukhulisa ukukhanya okuhle, ngakho-ke lapho i-COB li ...
2835 Ikhwalithi ephezulu ye-LED Light
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-2835 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwesibani se-LED, ukukhanyisa emuva nokunye. I-White Power LED iyatholakala ebangeni lokushisa kombala kusuka ku-2600K kuye ku-7000K. Le ngxenye inokuphrinta ngonyawo okuhambisana nobukhulu obulinganayo be-LED emakethe namuhla. • Usayizi: 2.8 x 3 ....
2835 Ukukhanya okuphezulu kwe-LED
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-2835 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwesibani se-LED, ukukhanyisa emuva nokunye. I-White Power LED iyatholakala ebangeni lokushisa kombala kusuka ku-2600K kuye ku-7000K. Le ngxenye inokuphrinta ngonyawo okuhambisana nobukhulu obulinganayo be-LED emakethe namuhla. • Usayizi: 2.8 x ...